ArnFunda ukuhweba | Izimpawu Zamahhala ze-Forex | Isikole Esihamba Phambili Sokuhweba Emhlabeni
THOLA IZIMPAWU ZE-VIP FOREX
Okuphakelayo Kwezindaba zeFX
Izindaba ze-EUR / USD
Ama-Akhawunti E-Forex Axhasiwe
Amapulatifomu amahle kakhulu we-Forex
Izinkomba ze-Forex ezihamba phambili
Amaqembu eTelegram Ahamba Phambili Ahamba Phambili Ama-2021
I-akhawunti ye-Forex Demo
Ama-Akhawunti Encane Nama-Micro
Izeluleko Zokuhweba ze-Forex
Khipha ku-internet Forex EAs
Iphethwe ama-akhawunti we-Forex
Ama-Akhawunti we-PAMM aphethwe
Forex Ukuhweba PDF
Funda ukuthi Ungahweba kanjani i-Crypto
Funda Ukuhweba Nge-Bitcoin
Amaqembu weTelegram Ahamba Phambili Ahamba Phambili Ama-2021
Izingxenyekazi ezihamba phambili ze-Crypto Trading
Thenga i-Bitcoin NgeKhadi Lesikweletu
Thenga i-Bitcoin NgeDebit Card
Ungayithenga Kanjani i-Ethereum
I-Bitcoin Cloud Mining
Ukubuyekezwa Kwesekethe seBitcoin
Ukubuyekezwa kwe-Bitcoin Digital
Ukubuyekezwa kwe-Bitcoin Prime
Funda Ukuhweba Forex
Iyini iMakethe ye-Forex
Funda Ukuhweba Amasheya
Funda Ukuhweba Emini
Amasu okuhweba ngosuku
Funda Intengo Yokwenza Ukuhweba
Yini ama-Forex Pips
Funda ukuhweba ngeSwing
Ungakusebenzisa Kanjani Ukusizakala
Ungakuphatha Kanjani Ukusabalala Kwakho
Ungayisebenzisa kanjani i-Scalp Trade
Ungawenza Kanjani Amasheya Amfishane
Ungayisebenzisa Kanjani Imajini Lapho Uhweba
Amapulatifomu amahle kakhulu wokuhweba
Izimpawu ezihamba phambili zesitoko
Kopisha ngokuzenzakalela ukuhweba kwethu ku-eToro
Izinhlelo Zokuhweba ezihamba phambili ze Forex
Ama-Akhawunti Wokuhweba wase-UK
Inani Lokuhweba Ngezenzo PDF
Ukuhweba ngamasheya ePenny
Ingabe i-Forex Ukuhweba Halal
Ama-Akhawunti Okuhweba AmaSulumane
Abahwebi Abakhulu ku-eToro
Ama-ASIC Brokers amahle kakhulu
Abathengisi Abahamba phambili beCFTC
Abathengisi Abahamba phambili beCySEC
Ama-Brokers amahle kakhulu e-FCA
Ama-SEBI Brokers amahle kakhulu
Ukubuyekezwa Kwezimakethe Zomhlaba
Umhlinzeki Wezimpawu Ezihamba Phambili Wezwe
Izimakethe zomhlaba kutholakale kalula
nganoma yisiphi isikhathi, noma kuphi
Joyina iTelegram yethu yezimpawu zamahhala!
I-Crypto Roundup yamaviki onke
I-BTC, i-ETH, i-XRP ne-LTC Technical Outlook
I-CRYPTO 0.25 USD
Ama-akhawunti we-CFD angama-75% alahlekelwa yimali
Qala Ukuthola Izimpawu ZAMAHHALA Manje!
Kufika ku-10 Izimpawu Ezinembile, Ezizuzisayo Ngosuku
Ukufinyelela okulula kwama-Forex ne-Crypto Signals
Ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kwansuku zonke namathiphu wokuhweba
Umphakathi wabadayisi abangaphezu kuka-15,000 abakhuthele
Izaziso zesikhathi sangempela, konke ngeTelegram!
Joyina iqembu leTelegram
Izaziso ezisheshayo ze-imeyili yakho
Phakathi kwezimpawu ezi-4-5 ezinembile, ezinenzuzo ngosuku!
Izeluleko Zansuku zonke Zokuhlaziywa Kwezobuchwepheshe Nezokuhweba
I-USD / CAD Iyashintshashintsha Phakathi Kwamazinga 1.2500 no-1.2640, Ukuthengisa Ingcindezi Cishe
ULwesithathu, April 14, 2021
Amaleveli Wokumelana Okubalulekile: 1.4200, 1.4400, 1.4600Amaleveli Wokusekela Abalulekile: 1.3400, 1.3200, 1.3000 USD / CAD Price Long-term Trend: I-BearishUSD / CAD pair ise-downtrend. Laba bobabili benze uptrend kafushane baze bafinyelela ezingeni le-1.2600 ngoMashi 30. Kuleli sonto eledlule, ukunyuka okuphezulu kuphazamisekile endaweni ephakeme yakamuva. Ohlangothini olubheke phezulu, uma abathengi behluleka ukwephula […]
I-ETH / USD
Ukuhlaziywa Kwamanani e-Ethereum (ETH): I-Ether iqhubeka neRally yayo njengoba Iphula Ukumelana ku- $ 2,150 naku- $ 2,200
Izinkunzi ze-Ethereum zigqashula ukumelana ku- $ 2,150 naku- $ 2,200I-altcoin enkulu iphule ukumelana ezingeni lama- $ 2,300 Ethereum ETH) Izibalo Zamanje Intengo yamanje: $ 2,349.68Imakethe Yezentengiselwano: $ 270,957,376,500Ivolumu yokuThengisa: $ 30,816,542,480Izindawo zokuhlinzeka ngemali enkulu: $ 2,000, $ 2,200, $ 2,400, $ 1,800, $ 51,600 $ 1,400, $ 14 Ethereum (ETH) Ukuhlaziywa Kwamanani Ephreli 2021, 2,150 Abathengi sebephule ukumelana kwe- $ 2,200 ne- $ XNUMX njengo-Ether […]
I-Dollar yase-US Ihlala Ibuthakathaka Ngesikhathi Sokushoda Komfutho eBrithani Pound
ULwesibili, April 13, 2021
Idola laseMelika belilokhu libuthakathaka izolo, yize isivuno seminyaka eyishumi sezibopho zase-US sikhuphuke kancane, ukunakwa kwemakethe kwaphendukela kwi-CPI ngoMashi. Qaphela ukuthi ukukhula kwe-CPI yase-US kulindeleke ukuthi kusheshe ngoMashi, futhi uma lokho kwenzeka, kungakhuphula ukulindelwa kokuqhubeka kwengcindezi yokwenyuka kwamandla emali emnothweni wase-US, okuyi […]
I-Bitcoin Breaks New All-Time High Phambili Kohlu lweCoinbase Nasdaq
Njengoba iCoinbase isizokwethula uhlu lwayo lomphakathi eNasdaq kusasa, abatshalizimali basemaphethelweni ezihlalo zabo ngalokho abanethemba lokuthi kungaba yingqophamlando yokwamukelwa kweBitcoin (BTC) kanye nama-cryptocurrensets jikelele. Lo mcimbi uzoba ngokokuqala emlandweni ukushintshaniswa kwemali ye-idijithali yemali enkulu njengo […]
I-US Wall Street 30
I-US Wall Street 30 (US30USD) Falls njengoba Intengo Ifinyelela Ezingeni 34000 Resistance Zone
Izindawo Ezimqoka Zokumelana: 33000, 33500, 34000Izindawo Zokusekela Eziyinhloko: 26000, 25500, 25000 US Wall Street 30 (US30USD) Umkhuba Wesikhathi Eside: I-BullishUS30USD ibuyela emuva ngemuva kwenkomba ehlolwe izinga lokumelana nendawo engu-34000. Ngaphandle kwalokho, inkomba ihweba esifundeni esithengwe kakhulu semakethe. Ithuluzi le-Fibonacci likhombise ukuguqulwa okungenzeka kuleli zinga. Khonamanjalo ngoMashi 18 […]
Thenga iCroda ngendima yayo ebalulekile emithini yokugoma iCovid mRNA
I-Croda International (CRDA), inkampani yamakhemikhali yase-UK, izwakala njengesitokisi sezimboni ezinothuli - hhayi okuthokozisayo kakhulu kepha okuholela ngokuqinile nokukhokhela izinzuzo. I-Well Croda ngokuqinisekile ikhokha inzuzo, noma ngabe isivuno esiphansi sika-1.7% nemali etholwayo iyahambisana futhi iyabikezela, futhi ibikade ikhula phezulu ekukhuleni […]
Iziphathimandla Zentela YaseSpain Zikhipha Izincwadi Ezixwayisa Kubatshalizimali BaseKhaya be-Cryptocurrency
Uhulumeni waseSpain useqalile ukuphoqelela isimo sakhe esinzima se-cryptocurrency, njengoba i-ejensi yentela kazwelonke isiqale ukusebenza. Imibiko ikhombisa ukuthi iHacienda isanda kukhipha izincwadi eziyizixwayiso eziyi-14,800 5,000 ezakhamuzini ezihlulekile noma ezisazomemezela ukubanjwa kwazo kwe-crypto. Isexwayiso siveze ukuthi labo ababhalelwa izikweletu bazozithola bethola inhlawulo engaphezu kwama-euro ayizi-5,900 XNUMX ($ XNUMX). […]
Ukuqhubeka kwe-USD / SGD Pattern!
I-USD / SGD yehle ngemuva kokukhishwa kwedatha ye-inflation yase-US kepha isengabuya ibuye iphakeme. Kuthengiswa ngo-1.3419 ngesikhathi sokubhala ngemuva kokuzama kabusha i-pivot yansuku zonke ka-1.3414. Ukubuyela emuva okuphezulu kulindelwe ngandlela thile ngemuva kokuphula ngaphezu komugqa omkhulu we-downtrend. Lo mbhangqwana usungule unxantathu ku-H4 okuthi […]
I-USDCHF igxuma kumalows azungeze ama-0.9200 Izifunda phakathi kwamanani we-inflation ase-US
Ukuhlaziywa Kwentengo ye-USDCHF - Ephreli 13 Ngemuva kokudonsa izinsuku ezi-5 zilandelana, umbhangqwana we-USDCHF wehla kancane ngo-0.9200 ekuqaleni kweseshini yangoLwesibili yaseYurophu / naseMelika. Ukuphindaphinda kombhangqwana kukhuphuke ngokuzungeze i-0.9259 intraday ephezulu futhi ngesikhathi salokhu okuthunyelwe bekuzulazula kuzinga le-0.9213. Idola laseMelika lisendleleni eqaphile […]
I-USDMXN ibhampa kusuka ezingeni lokhiye lomlando
Ukwesekwa Okubalulekile: Ukumelana Okubalulekile kwe-20.00: 20.55 - 20.90 -21.60 I-USDMXN ibikade inyakaze kakhulu isikhathi esingaphezu kwenyanga selokhu yabuyela emuva ngoMashi 8. Lokho -7.35% kuhamba. Leli zinga libuye libe yi-0.764 yokudonsela emuva kokunyakaza kokugcina kwesikhathi eside. Futhi, lokhu kuhamba kwamaviki ama-5 kokugcina […]
Hweba izimakethe nge
IZIMPAWU ZOKUPHAKATHI KWE-FOREX
Landela yethu izimpawu ze-Forex zamahhala kuma-cryptocurrensets, izimpahla, nama-indices
Kopisha abathengisi abahamba phambili
Ukubamba amathuba emakethe nge Abathengisi abahamba phambili be-Forex
Funda ukuhweba ngamasu we-Forex nezindaba
Amabhuloki Wase-Forex &
Umhlahlandlela Wokugcina kubathengisi be-Forex
Akungabazeki ukuthi umthengisi udlala indima ebaluleke kakhulu emakethe ye-Forex. Kepha njengomuntu oqalayo, uyaqonda ukuthi iyiphi indima abadlala ngayo abadayisi? Funda eyethu Umhlahlandlela wabathengisi be-Forex lapha ukwazi izindima eziyinhloko zomthengisi we-Forex.
Ukuhweba okuningi kufanele kwenziwe njenge-newbie emakethe ye-Forex, kepha-ke (futhi), udinga ipulatifomu ehamba phambili yokuhweba ukwenza imisebenzi yakho. Yingakho ke ikhasi lethu lapha liyachaza amapulatifomu amahle kakhulu wokuhweba kwabaqalayo.
Gcina Ijenali Yokuhweba
Ijenali yokuhweba imane nje ilog yawo wonke umsebenzi wakho wokuhweba. Imvamisa, iphephabhuku lihlinzeka ithuluzi kunoma yibaphi abathengisi abanzima abadinga ukuzihlola ngokufanele. Kodwa kubaluleke ngani ukugcina iphephabhuku elihlukile? Ake sikutshele konke odinga ukukwazi lapha.
Kufundwa Amanani Wenzalo
Izinguquko zamazinga wenzalo zithonya kakhulu imakethe ye-forex. Izinguquko zivame ukwenziwa ngelinye lamabhange aphakathi komhlaba ayisishiyagalombili. Izinguquko zenza imithelela ngokushesha kubadayisi bezimakethe, ngakho-ke, ukuqonda ukuthi kuzokwenziwa kanjani nokubikezela ukuthi lezi zinyathelo kuzoba phakathi kokuqala izinyathelo zokwenza inzuzo ephakeme.
Qedela ukuthenga kwakho
Impumelelo Kusukela Ngosuku Lokuqala
Funda Ukuhweba Uma usanda kuqala emhlabeni we ukuthengiswa kwe-inthanethi, impela ufike endaweni efanele. Iwebhusayithi yethu izokuhlomisa ngawo wonke amathuluzi adingekayo ukuze umsebenzi wakho wokuhweba uhambe ngonyawo lwesokudla.
Sinikeza imihlahlandlela ephelele ekuhwebeni kwezinto zonke - njengokuthi imboni ye-multi-trillion yamaphawundi isebenza kanjani, ama-CFD ayini nokuthi kungani ebaluleke kakhulu ezinhlosweni zakho zokutshala imali zesikhathi eside, ukusizakala, ukusabalala, ama-oda emakethe, nanoma yini enye Sicabanga ukuthi kufanele wazi ngaphambi kokuqala ukubeka engcupheni izimali zakho.
Ngokweqile, lapho uchitha isikhathi esidingekayo upheqa ngamathuluzi ethu amaningi ezemfundo, uzoshiya ipulatifomu yethu ngamakhono nolwazi oludingekayo ukuze uphumelele emizameni yakho yokuhweba online.
Ukuhweba Kwabaqalayo: Kusebenza Kanjani Ukuhweba Kwe-inthanethi?
Uma ungakaze ubeke ukuhweba okukodwa empilweni yakho, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi wenzani ngaphambi kokuhlukana nemali yakho. Ngemuva kwakho konke, ukuhweba nge-inthanethi kuza nenqwaba yezingozi - eziningi zazo ezingathiya ikhono lakho lokwenza inzuzo engaguquguquki. Kanjalo, ake siqale ngokuthola ukubuka konke okungama-360-degree kokuthi inqubo yokuhweba yokuphela kokuphela.
Ukukhetha i-Online Broker
Ukuze uhwebe online, uzodinga ukusebenzisa umthengisi. Sezidlulile izinsuku lapho udinga ukubeka ukuthenga nokuthengisa ama-oda ngocingo nge-stockbroker yendabuko.
Ngokuphambene nalokho, konke manje kwenziwa online. Eqinisweni, hhayi kuphela lapho ungathengisa usuka entofontofo yekhaya lakho, kepha abathengisi abaningi online manje banikela ngezinhlelo zokusebenza zokuhweba ngokugcwele. Ngakho-ke, manje usungathengisa ngenkathi usohambeni.
Ngalokho kushiwo, kukhona izinkulungwane zabathengi be-inthanethi abasebenzela amaklayenti ansuku zonke abathengisa. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kuzuzisa kakhulu ngokombono wakho njengomhwebi, njengoba ukugcwala ngokweqile kwamapulatifomu kusho ukuthi abadayisi kumele bakhuphule izintambo ukuzivikela emncintiswaneni.
Lokhu kungahle kufike ngendlela yemali encishisiwe yokuhweba nokusabalala okuqinile, noma izici ezintsha ezinjenge- 'Copy Trading'. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukwazi ukuthi iyiphi ipulatifomu yokuhweba online ongena kuyo.
Ukhetha Kanjani Ipulatifomu Yokuhweba eku-inthanethi?
Ukukusiza lapho usendleleni, sibhale ezinye zezinto ezibaluleke kakhulu okudingeka uzicabangele lapho ukhetha umthengisi we-inthanethi.
Ukuze unikele ngezinsizakalo zokuhweba eziku-inthanethi kumakhasimende athengisa e-UK, ama-broker kufanele alawulwe yi-Financial Conduct Authority (FCA). Ngakho-ke, lokhu kuyimfuno engavumelani uma kukhulunywa ngokukhetha ipulatifomu entsha.
Ezimweni eziningi, umthengisi oku-inthanethi uzobhala inombolo yakhe yokubhalisa ye-FCA, ongayibhekisa kuyo ngokusebenzisa iwebhusayithi yomlawuli. Uma kungenjalo, ungasesha igama lomthengisi online ngerejista ye-FCA. Ekugcineni, uma umthengisi engayitholi ilayisense ye-FCA, kufanele ugweme ipulatifomu ngazo zonke izindlela.
Udinga futhi ukucabanga ukuthi iyiphi indlela yokukhokha okhetha ukuyisebenzisa uma kukhulunywa ngokufaka nokukhipha imali. Indlela elula yokwenza lokhu ngedebhithi noma ngekhadi lesikweletu, njengoba amadiphozi ngokuvamile ayashesha.
Ngaphezu kwalokho, abanye abathengi bavumela ukuthi usebenzise i-e-wallet efana ne-PayPal noma i-Skrill, yize lokhu kungenjalo ngaso sonke isikhathi. Ngokwengeziwe, abathengisi abaningi basekela ukudluliswa kwamabhange. Yize lokhu kuvame ukuvumela imikhawulo ephezulu, ukudluliswa kwamabhange kuyindlela yokukhokha ehamba kancane kakhulu.
🥇 Imali kanye Spreads
Uzodinga ukukhokha imali yohlobo oluthile ukuze usebenzise ipulatifomu yokuhweba online, njengoba abathengisi besebhizinisini lokwenza imali. Ungahle udinge ukukhokha ikhomishini eguquguqukayo, okuyiphesenti lemali oyithengisayo. Isibonelo, uma ubeka ukuhweba okungabiza u- £ 4,000, bese umthengisi akhokhise u-0.2% kukhomishini, uzogcina ukhokha u- £ 8 ngezimali.
Ngaphezulu kwekhomishini, futhi udinga ukucabangela ukusabalala. Lona umehluko phakathi kwentengo 'yokuthenga' nentengo 'yokuthengisa'. Uma ukusabalala kuphakeme kakhulu, khona-ke kuzoba nomthelela oqondile emandleni akho okwenza inzuzo engaguquguquki. Isibonelo, uma ukusabalala kufinyelela kumaphesenti wangempela we-1%, kuzodingeka wenze okungenani u-1% ukuze nje uphule.
Ruments Amathuluzi Ezezimali
Udinga futhi ukubhekela okunye maqondana nenombolo, nohlobo, lwezinsimbi zezezimali ezisingathwa umthengisi. Ezimweni eziningi kakhulu, amapulatifomu okuhweba online azohlanganisa ama-forex nama-CFD. Ngokuphathelene nokwangaphambili, kulapho uthenga futhi uthengise izimali, ngombono wokuzuza ngokunyakaza okuncane kwamanani entengo.
Endabeni yama-CFDs (inkontileka yokwehluka), lokhu kukuvumela ukuthi uqagele cishe kunoma isiphi isigaba sefa, ngaphandle kokudinga ukuba ngumnikazi wefa eliyimbangela. Isibonelo, ama-CFD akuvumela ukuthi uhwebe noma yini kusuka kumasheya nakwamasheya, igolide, uwoyela, igesi yemvelo, ama-indices emakethe yamasheya, amanani wenzalo, ikusasa, ngisho ne-cryptocurrensets.
Tools Amathuluzi Okuhweba
Ungcono kakhulu uma usebenzisa i-broker egcizelela kakhulu izinkomba zobuchwepheshe. Amathuluzi anjalo akuvumela ukuthi uhlaziye ukuthambekela kwamanani entengo endabeni esezingeni eliphakeme. Ngokwenza njalo, ubeka ithuba elihle kakhulu lokuhlola ukuthi inkomba yefa lakho olikhethile izohamba kuphi.
Izinkomba zobuchwepheshe ezaziwa kakhulu zifaka phakathi ama-stochastic oscillators, ama-average average (MA), inkomba yamandla yesihlobo (RSI), nama-bollinger bands. Ekugcineni, kufanele ukhethe amapulatifomu wokuhweba akwe-inthanethi anikezela ngezinkomba eziningi zobuchwepheshe.
Ukufinyelela kumathuluzi okucwaninga nakho kuyisici esibalulekile okudingeka uzibheke lapho ukhetha ipulatifomu entsha yokuhweba. Lokhu kufanele kufaka izibuyekezo zezindaba zesikhathi sangempela ezingaba nomthelela kwimpahla ethile noma imboni ethile.
Ngaphezu kwalokho, kuyasiza futhi lapho abadayisi benesigaba sokuhlaziya esizinikele. Yilapho abathengisi abangongoti bashicilela khona imibono yabo lapho impahla ethile kungenzeka ihambe khona ezimakethe esikhathini esifushane.
Vula i-Akhawunti Ngeplatifomu Yokuhweba eku-inthanethi
Lapho usukhethe umthengisi we-inthanethi ohlangabezana nezidingo zakho, kuzodingeka ukuthi uvule i-akhawunti. Inqubo yokubhalisa imvamisa ayithathi ngaphezu kwemizuzu engu-5-10. Empeleni, umthengisi udinga ukwazi ukuthi ungubani, nokuthi unolwazi oludingekayo lokuhweba online noma cha. Lokhu kwenzelwa ukuthi ipulatifomu ihlale ihambisana nemithethonqubo echazwe yi-FCA.
Nakhu ukuthi yiluphi ulwazi ozodinga ukulifaka lapho uvula i-akhawunti ngesayithi lokuhweba.
✔️ Ulwazi lomuntu siqu
Uzodinga ukufaka imininingwane yakho yangasese. Lokhu kuzofaka igama lakho eligcwele, ikheli lasekhaya, usuku lokuzalwa, inombolo yomshuwalense kazwelonke, nemininingwane yokuxhumana.
✔️ Imininingwane Yezokuqashwa
Umdayiseli uzodinga ukwazi isimo sakho sokuqashwa nemali yakho engenayo yonyaka ngemuva kwentela.
✔️ Ukuma Kwezezimali
Uzodinga ukuthi umthengisi azi ukuthi inani lakho elilinganisiwe lenani, nokuthi ngabe uyikhasimende elidayisayo noma lesikhungo.
✔️ Isipiliyoni Sokuhweba Esedlule
Umthengisi uzokubuza imibuzo ephathelene nesipiliyoni sakho sokuhweba sangaphambilini. Lokhu kuzofaka phakathi uhlobo lwezimpahla owathengise ngazo esikhathini esidlule, nosayizi wokuhweba ojwayelekile.
Ukuze uhlale uthobela imithetho emelene nemali, wonke amapulatifomu alawulwa yi-FCA azodinga ukuqinisekisa ubunikazi bakho. Le nqubo iqondile futhi idinga ukuthi ulayishe ikhophi le-ID yakho ekhishwe uhulumeni, kanye nobufakazi bekheli.
Yize abanye abathengisi bekuvumela ukuthi ufake imali ngaphambi kokuthi inqubo yokuqinisekisa isiqediwe, ngeke ukwazi ukukhipha imali kuze kube yilapho imibhalo yakho isiqinisekisiwe. Ngakho-ke, kungcono ukukhipha inqubo ye-KYC (Yazi Ikhasimende Lakho) ngokushesha nje lapho uvula i-akhawunti.
Ama-deposit kanye nokuKhipha
Uma kukhulunywa ngokuxhasa nge-akhawunti yakho yomthengisi, kufanele unikezwe izindlela ezahlukahlukene zokukhokha. Yize lokhu kuzohluka kusuka kumthengisi kuya kubarhwebi, sibhale izindlela ezivame kakhulu zokufaka kanye nokuhoxa ngezansi.
Ards Amakhadi Okukhokha Nesikweletu
Ukufaka imali ngedebhithi / ngekhadi lesikweletu kuvamise ukuthi imali ibalwe ngokushesha. Bheka izimali - ikakhulukazi uma usebenzisa ikhadi lesikweletu. Ngenkathi umthengisi engeke akukhokhise noma yiziphi izimali ngasosonke isikhathi, okhipha ikhadi lesikweletu angahle abeke idiphozi njengemali engaphambili. Uma kwenzeka, lokhu kungaheha imali engu-3%, ngenzalo isetshenziswe ngokushesha.
Iningi lamapulatifomu wokuhweba akwe-inthanethi azokwamukela ukudluliswa kwebhange. Inqubo ihamba kancane kunokukhokha kwekhadi lesikweletu / lesikweletu, yize imingcele ivame ukuba phezulu. Uma idiphozi yenziwa nge-UK Faster Payments, izimali zingakhishwa ngosuku olufanayo.
Yize kungejwayelekile kangako kunedebhithi / ikhadi lesikweletu noma ukudluliswa kwebhange, abathengisi abaningi bentsha manje sebemukela ama-e-wallet. Lokhu kufaka ukuthandwa kwe-PayPal, i-Skrill, ne-Neteller. Ama-E-Wallet deposits awagcini mahhala, kepha ezimweni eziningi, akuvumela ukuthi ukhiphe imali yakho ngesikhathi esisheshayo.
Uma unentshisekelo yokuthola inzuzo kusuka esikhaleni se-multi-trillion pound forex, lapho-ke uzobe uthenga futhi uthengise izimali. Umqondo obanzi ukwenza inzuzo futhi lapho amazinga wokushintshaniswa kwemali ehamba.
Njengoba unjalo, uzobe uhweba nge 'forex' yamabili, equkethe izinhlobo ezimbili zezimali. Isibonelo, uma ufuna ukuhweba iphawundi elilinganiselwe nge-euro, kuzodingeka ukuthi uhwebe i-GBP / EUR.
Ngalokho kushiwo, abanye abathengisi bazoklelisa ngaphezulu kwamabhangqa emali ahlukene ayi-100. Lezi zibhangqa zemali zihlukaniswe zaba izigaba ezintathu eziyinhloko - ama-majors, abancane kanye nama-exotic.
Njengoba igama liphakamisa, amabhangqa amakhulu aqukethe imali ezimbili 'ezinkulu'. Lokhu kuzobandakanya izimali ezivela emnothweni omkhulu kunayo yonke emhlabeni, njengedola laseMelika, iphawundi laseBrithani, i-euro, i-yen yaseJapan neSwitzerland franc
Uma usanda kuqala emhlabeni wokuhweba kwangaphambili, kungakuhle ukuthi unamathele ngababili abakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi ama-majors ahlangabezana namazinga aphansi okuguquguquka, ukusabalala okuqinile, nezinqwaba zezimali.
Amabili amancane azoba nemali eyodwa enkulu kanye nemali eyodwa engaphansi ketshezi. I-AUD / USD yisibonelo esivelele sepheya elincane. Idola laseMelika limele imali enkulu yalaba bobabili, kuyilapho idola lase-Australia liyimali engafuneki kangako.
Yize izingane zisazuza kumanani abalulekile okukhishwa kwemali, ukusakazeka kuvame ukubanzi kakhulu kunama-majors. Lokhu kusho ukuthi ukuhweba kwabancane kubiza kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Ngalokho kusho, ukungazethembi kuphakame kancane ngababili abancane, ngakho-ke kunamathuba amaningi okwenza inzuzo enkulu.
Amabhangqa emali exotic azoba nemali evelayo nemali enkulu. Lokhu kungafaka idola laseMelika ne-dong yaseVietnam, noma iphawundi enhle kakhulu ngokumelene ne-lira yaseTurkey.
Kunoma ikuphi, ukubhangqa okungajwayelekile kungashintshashintsha ngokweqile, futhi ukusabalala kuvame ukubanzi kakhulu. Kungakho ungcono kakhulu ukugwema ama-exotic uze ufunde ukuhweba i-forex ezingeni eliphakeme.
Isebenza Kanjani Ukuhweba Nge-Forex?
Lapho usukhethe i-currency pair ethatha okufisayo, kuzodingeka ukuthi unqume ukuthi imakethe izohamba ngaliphi. Ngaphambi kokuthi sihlolisise izisekelo, kubalulekile ukucacisa umehluko phakathi kwe-oda elithi 'thenga' nokuthi 'uthengise' kumongo wokuhweba kwangaphambili.
You Uma ukholwa ukuthi imali ebekwe ku- uhlangothi olungakwesokunxele kwalaba bobabili bazoya ukwandisa ngenani, khona-ke udinga ukubeka ifayela le- thenga i-oda.
You Uma ukholwa ukuthi imali ebekwe ku- uhlangothi olungakwesokudla kwalaba bobabili bazoya ukwandisa ngenani, khona-ke udinga ukubeka ifayela le- thengisa i-oda.
Isibonelo, ake sithi uhweba nge-GBP / USD. Uma uzwe ukuthi i-GBP kungenzeka inyuke ngenani uma iqhathaniswa ne-USD, lapho-ke sizobeka i-oda lokuthenga. Ngokufanayo, uma uzwe ukuthi i-USD izokwenyuka uma iqhathaniswa ne-GBP, ungafaka i-oda lokuthengisa.
Isibonelo se-oda elithi 'Thenga' ku-Forex Trading
Ukunamathela kutimu ye-GBP / USD, ake sithi 'ufake i-oda le- £ 500' buy '. Lokhu kusho ukuthi ukholwa ukuthi i-GBP izokhuphuka ngentengo uma iqhathaniswa ne-USD.
Intengo ye-GBP / USD njengamanje ingu-1.32
Ufake i-oda lokuthenga elingu- £ 500
I-GBP / USD inyuka iye ku-1.34, okusho ukuthi i-GBP iya ngokuqina uma iqhathaniswa ne-USD
Lokhu kusho ukwanda ngo-1.51%
Inzuzo yakho ingaba ngu- £ 7.55 (£ 500 x 1.51%)
Isibonelo se-oda elithi 'Thengisa' ku-Forex Trading
Kulesi sibonelo, sizonamathela ne-GBP / USD. Ngalesi sikhathi kuphela, sizofaka i-oda 'lokuthengisa'. Lokhu kusho ukuthi ukholwa ukuthi i-USD izodlula i-GBP.
Ubeke i- £ 1,500 ethengisa i-oda
I-GBP / USD iyehla iye ku-1.29, okusho ukuthi i-USD iya ngokuqina uma iqhathaniswa ne-GBP
Lokhu kusho ukwehla kuka-2.27%
Inzuzo yakho ingaba ngu- £ 34.05 (£ 1,500 x 2.27%)
Funda ukuhweba ama-CFD
Ingxenye yesibili enkulu yesikhala sokuhweba online yileso samaCFD. Njengoba sishilo kafushane phambilini, ama-CFD akuvumela ukuthi uthenge futhi uthengise cishe zonke izigaba zamafa ongazicabanga. Lokhu kungenxa yokuthi awudingi ukuthi ube ngumnikazi noma ugcine impahla engaphansi ukuze utshale imali kuyo.
Esikhundleni salokho, ama-CFD amane alandelela inani langempela lomhlaba wefa okukhulunywa ngalo. Ngakho-ke, ama-CFD akulungele kakhulu ukufinyelela ezimakethe okungaba nzima ukufinyelela kuzo ezinye.
Ngezansi sibhale izigaba eziyinhloko zamafa ezimbozwa yi-CFD.
Amasheya Amasheya Namasheya
✔️ Izinsimbi Ezinzima
Isebenza Kanjani Ukuhweba Kwe-CFD?
Ngokuya ngokuthi ukuhweba kwe-CFD kusebenza kanjani ngempela, lokhu kufana kakhulu nokuthenga nokuthengisa ngababili be-forex. Umehluko omkhulu okudingeka waziswe ngawo kulesi sikhathi yigama. Ngenkathi sise-forex ngokujwayelekile sinquma ukuhweba njengokuthenga noma ukuthengisa ukuhleleka, esikhaleni seCFD sisebenzisa amagama athi 'made' futhi 'mafushane'.
Ngaphezu kwalokho, ama-CFD awaveli ngababili njenge-forex. Esikhundleni salokho, uthengisa impahla ngokuqhathanisa nenani lomhlaba wangempela wemali ebusayo, okuvamise ukuba yidola laseMelika. Isibonelo, noma ngabe uthengisa ama-CFD ngesitoko, uwoyela, igesi yemvelo, noma igolide - izimpahla zivame ukubizwa ngentengo uma kuqhathaniswa ne-USD.
You Uma ukholwa ukuthi impahla izoya ukwandisa ngenani, khona-ke udinga ukubeka ifayela le- eside oda.
You Uma ukholwa ukuthi impahla izoya ukwehla ngenani, khona-ke udinga ukubeka ifayela le- okufushane oda.
Lesi ngesinye sezici ezikhanga kakhulu zokuhweba ama-CFD, njengoba uzohlala unenketho yokuthengisa okufishane. Yilapho ucabanga khona ngenani lokulahlekelwa kwempahla. Lokhu kuyinto ebingaba nzima ukuyiphindaphinda esikhaleni sendabuko sokutshala imali njengeklayenti elidayisa.
Uma ufuna ukuhweba amasheya isikhathi eside, khona-ke uzobe ungcono kakhulu ekuthengeni imali oyikhethile kumthengisi wamasheya ojwayelekile. Lokhu kungenxa yokuthi uzoba namasheya ngqo, okusho ukuthi uzojwayela uhla lokuvikelwa kwabatshalizimali.
Ngendlela ebucayi, lokhu kufaka nelungelo elisemthethweni kunoma yiziphi izinkokhelo zezabelo ezisatshalaliswa yinkampani okukhulunywa ngayo - ngokulingana nenani lamasheya owabambayo.
Kodwa-ke, uma ufuna ukufunda ukuhweba amasheya ngesikhashana esifushane, uzodinga ukusebenzisa ipulatifomu yeCFD. Lokhu kungenxa yokuthi izimali ezihambisana nokuthenga nokuthengisa amasheya ngomqondo wendabuko ziphakeme kakhulu kunama-CFD. Ngaphezu kwalokho - njengekhasimende lokuthengisa uzoba nethuba elincane, uma likhona, lokukwazi ukuthengisa isikhashana imali oyikhethile. Nakulokhu futhi, lokhu kuyinto enikezwa cishe yizo zonke izingxenyekazi zeCFD.
Noma kunjalo, uma ufuna ukufinyelela ezimakethe zamasheya zomhlaba wonke online, uzoba nezinketho ezimbili - ukuthenga nokuthengisa amasheya ngamanye, noma ukutshala imali kunkomba.
✔️ Ukuhweba Amasheya Ngamunye
Uma unamakhono adingekayo okutshala imali ezinkampanini ngazinye, uzokwazi ukufinyelela ezinkulungwaneni zezimali zeCFD. Lokhu kufaka phakathi izinkampani ze-blue-chip ezisohlwini lwezimakethe ezidumile njenge-NASDAQ neLondon Stock Exchange, kanye nezinkampani ezisebenza ngamanani amancane.
Uma ukhetha umzila we-CFD, inani lamasheya akho owakhethile lizokhombisa lelo lentengo yomhlaba wangempela wefa. Isibonelo, uma intengo yamasheya kagwayi waseBrithani American ikhuphuka ngo-2.3% esikhathini samahora angama-24, iCFD yayo nayo izokwenyuka ngo-2.3%.
✔ Ukuhweba i-Stock Market Index
Uma unesifiso sokuhweba amasheya namasheya, kepha awunalo ulwazi oludingekayo lokukhetha izinkampani ngazinye, kungakuhle ucabangele inkomba yemakethe yamasheya.
Futhi okubizwa ngokuthi 'ama-indices', izinkomba zemakethe yamasheya zikuvumela ukuba uqagele emakhulwini ezinkampani ekuhwebeni okukodwa - ngemuva kwalokho kuhlukaniswe isikhundla sakho ezimbonini eziningi.
Isibonelo, ngokutshala imali ku-S & P 500, ungathenga amasheya ezinkampanini ezingama-500 ezinkulu ezibalwe e-US. Ngokufanayo, inkomba ye-FTSE 100 ikuvumela ukuthi utshale imali ezinkampanini ezinkulu eziyi-100 ezisohlwini lweLondon Stock Exchange.
Nakulokhu futhi, uma ukhetha inkomba yemakethe yesitoko ngendlela yeCFD, uzoba nenketho yokuhamba isikhathi eside noma esifushane. Njengoba unjalo, usazothola ithuba lokwenza inzuzo noma ngabe izimakethe zamasheya ezibanzi ziphansi.
Kungakhathalekile ukuthi ngabe uhweba i-forex noma i-CFDs - udinga ukuqonda okuqinile ngokusakazeka. Ngendlela eyisisekelo, lo umehluko phakathi kwentengo 'yokuthenga' nentengo 'yokuthengisa'. Ngaphezulu kwamakhomishini wokuhweba, ukusabalala kuqinisekisa ukuthi abathengisi abenza online benza imali.
Usayizi wokusabalala ubalulekile kuwe njengomhwebi, njengoba kukhombisa ukuthi yiziphi izimali ozikhokhayo ngokungaqondile. Isibonelo, uma kukhona igebe elingu-0.5% ekusakazeni lapho kuthengiswa amasheya, lokhu kusho ukuthi udinga ukwenza okungenani u-0.5% wenzuzo ukuze uphule ngisho.
Isibonelo Sokusakazeka kuma-CFD
Indlela elula yokubala ukusabalala lapho uhweba ama-CFD ukwenza nje umehluko wamaphesenti phakathi kwentengo yokuthenga nokuthengisa.
Ubheke ukuhamba 'isikhathi eside' emafutheni
Umthengiseli wakho unikeza intengo 'yokuthenga' engu- $ 71
Intengo 'yokuthengisa' ingu- $ 69
Lokhu kusho ukuthi ukusabalala umehluko phakathi kuka- $ 69 no- $ 71
Ngokwemaphesenti, lokhu ukusabalala okungu-2.89%
Akunandaba noma ngabe uthatha isinqumo sokuhamba isikhathi eside noma esifushane ngamafutha, uzokhokha ukusabalala kwama-2.89%. Lokhu kusho ukuthi uzodinga ukwenza okungenani u-2.89% kuzuzo ukuze nje uphule.
You Uma uya eside kumafutha, uzodinga ukukhokha $ 71. Uma uphuma ngokushesha esikhundleni sakho, ungakwenza lokho ngentengo yokuthengisa ye- $ 69. Kanjalo, udinga inani lamafutha ukuze ukwandisa by 2.89% ukumane ngiphule.
You Uma uya okufushane kumafutha, uzodinga ukukhokha $ 69. Uma uphuma ngokushesha esikhundleni sakho, uzokwenza lokho ngentengo yokuthenga $ 71. Kanjalo, udinga inani lamafutha ukuze ukwehla by 2.89% ukumane ngiphule.
Ukusetshenziswa kuyithuluzi elijabulisayo futhi eliyingozi kakhulu ozolithola kumasayithi amaningi okuhweba online. Kafushane nje, amandla wokuphaka akuvumela ukuthi uhwebe kumazinga aphezulu kunalokho onakho ku-akhawunti yakho yomthengisi. Inani elithile linqunywa ngesici, njenge-2: 1, 5: 1, noma i-30: 1. Lapho le nto iphakama, kulapho uhweba kakhulu futhi ngaleyo ndlela - inzuzo yakho noma ukulahleka kwakho kuzokuba phezulu.
Isibonelo, ake sithi une- £ 300 kuphela ku-akhawunti yakho. Ufuna ukuhamba isikhathi eside ngegesi yemvelo, njengoba unomuzwa wokuthi impahla ayibhekwa kakhulu. Ngakho-ke, usebenzisa amandla we-10: 1, okusho ukuthi empeleni uhweba nge- £ 3,000.
Kulesi sibonelo, i- £ 300 yakho manje isiseceleni. Uma inani lokuhweba kwakho lehle ngesilinganiso esingu-10: 1 (100/10 = 10%), uzolahlekelwa yi-margin yakho yonke. Lokhu kwaziwa ngokuthi 'kuyavalwa'. Ngokufanayo, uma imajini yakho ibingu- £ 300 futhi ubudayisa ngo-25: 1, ubungavalwa uma impahla yehla ngesilinganiso esingu-25: 1 (100/25 = 4%).
Uma ungumthengisi odayisayo ozinze e-UK (noma noma yiliphi izwe eliyilungu laseYurophu ngalolo daba), uzobanjwa yimingcele yokufaka efakwe yi-European Securities and Markets Authority (ESMA).
Imikhawulo Yokusebenzisa i-ESMA
🥇 30: 1 ngababili abakhulu be forex
🥇 20: 1 ngazimbili ze-forex ezingezona ezinkulu, igolide, nezinkomba ezinkulu
🥇 10: 1 okwezimpahla ngaphandle kwezinkomba zokulingana ezingezona ezinkulu
🥇 5: 1 ngamasheya ngamanye
🥇 2: 1 i-cryptocurrensets
Ama-Market Orders: Ayini futhi asebenza kanjani?
Uma ufuna ukufunda ukuhweba online, kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi ama-oda emakethe asebenza kanjani. Empeleni, lokhu kuzokuvumela ukuthi uvale ngokuzenzakalela ukuhweba lapho amaphuzu athile entengo eshaywa.
Isibonelo, uma ukuhweba kukuvuna, ungaqinisekisa inzuzo ngokuvala ukuhweba ngokuzenzekelayo. Ngokufanayo, uma ukuhweba kungqubuzana nawe, i-oda lemakethe lingaphuma kwezohwebo futhi ngaleyo ndlela - linciphise ukulahlekelwa kwakho.
Ngezansi sibhale amanye ama-oda emakethe abaluleke kakhulu odinga ukwaziswa ngawo.
✔️ I-Stop-Loss Order
Njengoba igama liphakamisa, i-oda lokulahleka kokuyeka lizonciphisa ukuvezwa kwakho konke ekuhwebeni okulahlekile. Isibonelo, ake sithi ucabanga ngeBitcoin, bese uvula ukuhweba okubiza u- £ 2,000 ngentengo yokuthenga engu- $ 9,500.
Kanjalo, unethemba lokuthi intengo yeBitcoin iyenyuka. Kodwa-ke, uphinde ubeke i-oda lokulahleka kokuyeka uma kwenzeka izinto ziphambana nawe. Njengoba ungafuni ukulahlekelwa ngaphezu kwe-5% yenani lakho lokuhweba, ubeka i-oda lokulahleka kokuyeka ku- $ 9,025.
Ezinsukwini ezimbalwa nje kamuva, iBitcoin iyamathangi futhi ilahlekelwa inani elingu-20%. Ekuqaleni, ngabe ulahle i- £ 400 (20% of your £ 2,000 trade). Kodwa-ke, njengoba ufake ukulahleka okunengqondo kokuma ku- $ 9,025, wehlise ukulahlekelwa kwakho kwaba ngu- £ 100 nje (5% ka- £ 2,000).
I-oda eliqinisekisiwe lokumisa ukulahleka
Kusebenza ngempumelelo njengoba i-oda lokulahleka kokuyeka lisebenza, asikho isiqinisekiso sokuthi i-oda lakho lizogcwaliswa. Isibonelo, uma ngabe ufake i-oda lokulahleka kokuma ku-GBP / USD ngesikhathi somphumela wenhlolovo ye-Brexit, akunakwenzeka ukuthi i-oda belingathola umthengi. Lokhu kungenxa yokuthi i-GBP / USD idlule esikhathini sokuntengantenga okukhulu.
Ngokuphambene nalokho, i-oda eliqinisekisiwe lokumisa ukulahleka lizohlala liqondaniswa, njengoba kuyisivumelwano phakathi kwakho nomthengisi. Qaphela, kuzodingeka ukhokhe imali ephakeme ukwenza i-oda lokulahleka lokuyeka okuqinisekisiwe, noma kunjalo, kungakuhle ukukukhokha.
✔ Thatha i-Order -Profit Order
Yize kubalulekile ukuvikela ukuhweba kwakho ekuvezweni ngokweqile ekulahlekelweni okukhulu, futhi udinga ukusetha i-oda lokuvala ngokuzenzakalela ukuhweba lapho wenza inzuzo. Ngaphandle kwalokho, ungaphuthelwa yithuba lokungena ngaphakathi uma ungekho kudivayisi yakho yedeskithophu. Njengalokhu, ama-oda wenzuzo azovala ukuvalwa ngentengo echazwe ngaphambilini.
Isibonelo, uma uthengisa isiliva ku- $ 18.24, futhi ufisa ukukhiya inzuzo lapho impahla inyuka ngo-10%, ungafaka i-oda lenzuzo ku- $ 20.06. Uma intengo ifika ku- $ 20.06, ukuhweba kuzovalwa ngokuzenzekelayo ngenzuzo ye-10%.
Ungalokothi Uphuthelwe Ukuhweba Futhi
Izaziso zesiginali yesikhathi sangempela noma nini lapho kuvulwa isiginali, ivala noma ivuselelwe
Izaziso ezisheshayo ze-imeyili yakho neselula.
Izinga Lamanani Okungena
Izinga lentengo lokungena layo yonke isignali Vele ukhethe omunye wabathengi bethu abaphezulu ohlwini olungenhla ukuze uthole konke lokhu mahhala.
I-GBP / USB THENGA
Ngingathanda ukuthola izibuyekezo zemakethe, ukukhushulwa okukhethekile nezincwadi zezindaba. Ngifundile, ngazwisisa futhi ngamukela imigomo nemibandela kanye nenqubomgomo yobumfihlo.
Izimpawu ezihamba phambili ze-Forex 2021
Ungayisebenzisa kanjani i-Forex Signals
I-Forex Trading Course
Phila Amanani we-Forex & Amashadi
Ucingo lwezimpawu ze Forex
Umhlahlandlela Wabathengisi be Forex
Ungayikhetha kanjani i-Broker
I-Crypto Signals Telegram
Funda i-2 Trade igama lokuhweba leGadget Geek Online Ltd
Inombolo ye-20-22 Wenlock Road, eLondon N1 7GU Inkampani Ebhalisiwe: 11746374
Imininingwane ekuwebhusayithi yeLearn2.trade nangaphakathi kweqembu lethu leTelegram yenzelwe izinjongo zokufundisa futhi akumele ithathwe njengeseluleko sokutshala imali. Ukuhweba ezimakethe zezezimali kunengozi enkulu futhi kungahle kungalungeli bonke abatshalizimali. Ngaphambi kokuhweba, kufanele ubheke ngokucophelela izinhloso zakho zokutshala imali, isipiliyoni, kanye nesifiso sobungozi. Ukuhweba ngemali kuphela okulungele ukulahlekelwa. Njenganoma yikuphi ukutshalwa kwezimali, kukhona ithuba lokuthi ungagcina ukulahlekelwa okuthile noma konke okutshalile ngenkathi uhweba. Kufanele ufune izeluleko ezizimele ngaphambi kokuhweba uma unokungabaza. Ukusebenza okwedlule ezimakethe akuyona inkomba ethembekile yokusebenza kwesikhathi esizayo.
I-Learn2.trade ayithathi umthwalo wokulahlekelwa okutholakele ngenxa yokuqukethwe okunikezwe ngaphakathi kwamaQembu ethu eTelegram. Ngokusayina njengelungu uyavuma ukuthi asinikezi izeluleko ngezezimali nokuthi wenza isinqumo ngokuhweba okwenzayo ezimakethe. Asinalo ulwazi ngezinga lemali ohweba ngalo noma izinga lobungozi olithathayo ngokuhweba ngakunye.
Iwebhusayithi yeLearn2.trade isebenzisa amakhukhi ukuze ikunikeze umuzwa omuhle kakhulu. Ngokuvakashela iwebhusayithi yethu ngesiphequluli sakho esisethelwe ukuvumela amakhukhi, noma ngokwamukela inqubomgomo yethu yekhukhi uvumela inqubomgomo yethu yobumfihlo, echaza inqubomgomo yethu yekhukhi.
I-copyright © 2021 Funda 2 Trade
Faka idiphozi engu- $ 250 ukuthola Izimpawu Zamahhala ze-VIP Forex Zonyaka ongu-1!
Thola izimpawu ze-VIPFaka idiphozi engu- $ 250 ukuthola Izimpawu Zamahhala ze-VIP Forex Zonyaka ongu-1! Ukuhweba ku-MT4 nge-Revenue kuze kufike ku-1: 500!
Sisebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi sikunikeza okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kuwebhusayithi yethu. Uma uqhubeka ukusebenzisa le sayithi sizocabanga ukuthi ujabule ngakho.OkInqubomgomo yobumfihlo